Malaala Yusaafsay: Xiddigtii Qarniga! | Radio Iftin
Malaala Yusaafsay: Xiddigtii Qarniga!
(Friday, March 27, 2015)- Malaala Yusaafsay waa gabadh da’yar oo Bakistaaniyad ah. Waxay dhalatay sannadkii 1997-kii waxaanay noqotay qofkii ugu da’da yaraa ee ku guulaysta abaal marinta Noble Peace Prize abid. Malaala waxa ay abaalmarintan ku heshay iyada oo u dooday xuquuqda bini’aadamka gaar ahaan waxbarashada haweenka. Gobolka ay ku nooshahay ayay dhaqdhaqaaq fara badan oo ay ugu doodayso waxbarashada dumarka ka samaysay kadib markii Daalibaanku ay xidheen qaar ka mid ah dugsiyadii gobolka.
Kadib markii ay muddo xidhnaayeen dugsiyada gobolkaasi haddana Daalibaanku waxa ay dib u fureen dugsiyadii wiilasha balse kuwii habluhu way xidhnaayeen illaa Feebarwari 2009. Malaala waxa ay in badan u doodday oo intii itaalkeeda ah isku dayday in dib loo soo celiyo dugsiyadii isla markaana waxbarasho ay habluhu helaan. Si kasta oo ay tahay haddana tirada dadka wax baranayaa ee gobolku aad bay u xadidnayd. Malaala iyada oo sawiraysa xaaladdii markaa taagnayd waxa ay mar ku qortay blog-eeda u gaarka hadalkan ‘‘7O qof oo kali ah ayaa aadaya dugsiyada iyada oo 700 oo qof ay diiwaan gashan yihiin’’
Waraysiyo badan oo lala yeeshay iyo warbixino dhawr ah oo oo laga diyaariyay kadib Malaala waxa ay noqotay qof warbaahinta aad looga hadal hayo.
Intaas kadib Malala waxa ay ku guulaysatay dhawr abaal marin . Oktoobar 2011, Malala waxa ay ku guulaysatay International Children’s Peace Prize.
Malala markii ay noqotay qof meelo badan laga aqoonsanyahay waxaa soo waajahday khataro badan oo nolosheeda ah. Bishii Oktoobar 2012-kii nin wajiga maro ku duubtay oo Daalibaan ah ayaa madaxa ka toogtay Malaala halkaas oo dhaawac xooggani ka soo gaadhay madaxa gaar ahaan maskaxda. Malaala waxa loo qaaday dhaqtar militarigu leeyahay oo ku yaal Peshawar halkaas oo qalliin xabbada lagaga saarayo loogu sameeyay.
Isku daygan dil ee lagu sameeyay Malaala wuxu ka dhigay Malaala qof magaceeda dunida laga yaqaan. Isku daygan waxa uu sidoo kale ku soo jeediyay Malaala isha caalamka. Sannadkii 2013, Malaala waxa ay qudbad ka jeedisay qaramada midoobay iyada oo da’deedu tahay 16 sanno. Isla sannadkan bishii Oktoobar Malaala waxa ay ifka u soo saartay buug ay nolosheeda kaga sheekaynayso oo ay u bixisay ‘I am Malala: The Girl Who Stood Up for Education and Was Shot by the Taliban ‘Waxa aan ahay Malaala: Gabadhii u istaagtay waxbarashada ee ay Daalibaanku toogteen’
Daalibaan may joojin cadaadinta ay ku hayaan Malaala, Malaalana may joojin u doodidda iyo taageeridda awoodda Waxbarashada. Bishii Oktoobar 10-keedii sannadkii 2013 baarlamaanka Yurub waxa uu Malaala guddoonsiiyay abaal marinta xorriyadda fikirka (Prize for Freedom of Thought) –
Oktoobar 2014 Malaala waxa ay ku guulaysatay abaal marinta caalamiga ah ee nabadda‘Nobel Peace Prize’ xilligaas da’deedu waxa ay ahayd toddoba iyo toban waxa ayna noqotay qofkii ugu da’da yaraa ee ku guulaytsta abaal marinta noocan ah. Raysal wasaaraha Baakistaan Nawaas Shariif ayaa si wayn ugu hambalyeeyay guusha ay gaadhay Malaala waxa uuna ku tilmaamay Malaala in ay tahay halyeeyad isla markaana ay sharaftii waddankeeda kor u qaadday. Sidoo kale xoghayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki Muun ayaa tibaaxay in geesinimadeedii iyo ku adkaanteedii dugsi aadistu uu ka dhigay macallimad caalamka laga yaqaan.
Fanaanadda caanka ah ee reer Maraykan Maddoona ayaa iyaduna heesteeda ‘Human Nature’ u hibaysay Malaala. Sidoo kale jilaaga Hollywood Anjaliina Juuli ‘Angelina Julie’ ayaa maqaal ka qortay Malaala isla markaan ururkeeda ugu deeqday lacag dhan $200,000. Filim soo saaraha reer Hindiya Amjaad Khan ayaa isaguna ballan qaaday in uu filin ku saabsan qisada Malaala uu soo saari doono. Oktoobar 2013 waxa ay Malala tagtay guriga cad ee Maraykanka looga taliyo halkaas oo ay kula kulantay Madaxweyne Obama xaaskiisa Misheel iyo inantooda Maaliya.
Isku soo wada duub oo Malaala waxa ay noqotay qof yar oo dedaal shaksi ah oo ay samaysay dartii ku mutaysatay abaal marino fara badan.
WQ: Muna Axmed Cumar